Degmada Afmadow oo loo magacaabay maamul cusub - Halbeeg News
AFMADOW(HALBEEG)-Wareegto maanta kasoo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland, Maxamed Warsame Darwiish ayaa maamul cuusb loogu soo magacaabay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose.
Wareegtadan ayaa lagu sheegay in wasaaradda oo ka duuleysa baahida loo qabo in degmadu yeelato maamul ka shaqeeya howlaha degmada iyo xariirka ay la leedahay dowlad goboleedka awgii ay lagama maarmaan noqotay in lasoo magacaabo guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeenka degmada Afmadow.
Wasaaradda ayaa mudane Yuusuf Xasan Xuseen u magacawday guddomiyaha degmada Afmadow halka guddoomiye ku xigeenkana loo magacaabay Cali Rabaax Sheekh Cumar.
“Laga bilaabo maanta oo ay tariikhdu tahay 13-1-2019-ka waxaan magacaabay masuuliyiinta magacyadooda ay kala yihiin Yusuuf Xassan Xuseen guddoomiyaha degmada Afmadow iyo Cali Rabaax Sheekh Cumar guddoomiye ku xigeenka degmada Afmadow,” ayaa lagu yiri wareegtada uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland.
Wareegtada ayaa lagu sheegay in magacaabista maamulka cusub ee degmada Afmadow ay ahayd mid ku timid rabitaanka odayaasha iyo waxgaradka degmada, waxaana ay ku soo beegantay xilli maalmihii u dambeeyay uu degmaasi ku sugnaa madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam iyo wafdi uu hoggaaminayo oo halkaa ka wada abaabul dagaal oo ay ku doonayaan in dagaal ay kula galaan ururka al-Shabaab ee ku sugan gobollada Jubbooyinka.